juin 2017 - Page 64 sur 64 -
Randrianarisoa Valonirina : “Ara-dalàna ny vidim-bary amin’izao fotoana izao”
07/06/2017 admintriatra 0
Raha nahitana fihenana ny vidim-bary teo aloha kely teo dia tsikaritra fa nahitana fiakarana kely indray izany, raha amin’iny faritra Ambodin’Isotry sy 67 ha sy ny manodidina iny no resahina. Teo amin’ny 1.600 Ariary teo …Tohiny
Tsy maty voalavo an-kibo ny solombavambahoaka lany tao Androy amin’ny anaran’ny Mapar, izay zatra nikirakira sy naka ny volam-bahoaka, fony izy kestera tao amin’ny antenimieram-pirenena tsiahivina ilay raharaha nahaverezana vola 4 lavitrisa Ariary. Ankehitriny dia …Tohiny
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ireo mpivarotra anaty trano voatokana ao anatin’ny Esplanade Analakely sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), amin’izao fotoana izao. Raha ny vaovao voaangona, mikasa ny handrodanana ilay trano fivarotana voatokana ao amin’ny …Tohiny
Ny alahady teo no nigadona teto Madagasikara ny Tale Jeneralin’ny OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izao no fitsidihana voalohany, taorian’ny nahalany azy ho Dg Oms ny volana mey 2017. Noraisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha ...Tohiny